Nhazi bụ onye nnọchi anya juu nke ika gị | Martech Zone
Nhazi nwere mmetụta nwere ike inyere gị aka ịka ndị asọmpi gị mma. Dị ka Ụlọ Ọrụ Nhazi Nhazi, ụlọ ọrụ ndị họọrọ imewe ihe dị egwu ka a hụrụ ka ha na -emeri ụlọ ọrụ ndị ọzọ nwere atụmatụ adịghị ike na ndepụta S&P site na 219%.
N'akụkụ aka nke ọzọ, Nnyocha Tyton Media kwubiri na 48% nke ndị mmadụ na -ekpebi ntụkwasị obi azụmaahịa site na webụsaịtị ya. Stats ndị a kwekọrọ n'echiche nke onye nrụpụta eserese ama ama, Paul Rand onye tụlere imewe dị ka onye nnọchi anya nkịtị nke ika gị.
Ọzọkwa, imewe na -emepụta asụsụ a na -ahụ anya na njikọta ozugbo na ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ gị, na -eme ka ntụkwasị obi na akara nke akara gị dị elu. Dịka onye nwe ụlọ ọrụ, ịkwesịrị ịmepụta mmetụta na -adịgide adịgide. Ọ bụ ebe ahụ ka imewe a na -abata ma nyere gị aka itinye aka ma kpalie ndị ahịa gị ma ọ bụ ndị na -ege ntị lekwasịrị anya.
Ọdịdị dị mma nwere mpempe akwụkwọ, atụmatụ ụcha, oge iburu ibu, yana atụmatụ enyi na enyi. Ihe ndị a nwere ike ịbawanye ohere ịnweta okporo ụzọ na weebụsaịtị gị.
Gịnị Mere Imepụta Ji Dị Mkpa?
Anya mmadụ chọrọ naanị 2.6 sekọnd iji lekwasị anya n'otu ihe dị na ibe weebụ, ka ndị nyocha si Mahadum Missouri nke Sayensị na Nkà na ụzụ kwubiri. Nhazi enyi na enyi nwere ike imetụta echiche ha.
Ndị mmadụ nwere [mmetụta] gbasara ụlọ ọrụ gị dabere na ahụmịhe ha nwere na ika. Akara nke edoziri nke ọma na webụsaịtị na-akpali obi ike n'ihi na ọ dị ka ọkachamara. Ọ bụrụ na ụlọ ọrụ dị njikere ilekwasị anya n'ịmepụta ihe dị ọcha na arụ ọrụ dị mfe iji, mgbe ahụ nke ahụ nwere ike bụrụ ihe na -egosi ihe iji ngwaahịa ha nwere ike ịdị.
Adriana Marin, Onye isi nka Artist
Ọdịdị dị mma na -enye ozi gị n'ụzọ kachasị dị irè:
Ọdịdị dị mma na -enyere aka izi ozi gị, na -adọkpụrụ ibu ka ị gafee mkparịta ụka ahịa, wee hazie ozi nke ọma maka ahịa ahụ ị na -achọ iru. Nhazi dị mma na izi ozi na -arụkọ ọrụ ọnụ iji gosipụta ọnụ ahịa azụmahịa gị nke ọma yana nke kachasị mkpa.
Lilian Crooks, onye mmebe eserese na ọkachamara nkwukọrịta na kọleji Harcum
Mara na atụmatụ dị mma abụghị naanị na weebụsaịtị ma ọ bụ logo. Ịkwesịrị ilekwasị anya na nkwakọ ngwaahịa ma ọ bụ nhazi ngwaahịa. Mgbe ngwaahịa gị na -ezipụta ozi gị, kọwaa ụkpụrụ gị ma rịọ ndị na -ege gị lekwasịrị anya, ị nwere ike mepụta akara dị egwu.
Ezi nhazi na -enyere gị aka ịpụ iche
Nhazi ahụ nwere ike ime ma ọ bụ mebie azụmahịa gị. Ọ bụrụ na ọ na -esiri ike ma na -arụkwa ọrụ, ọ ga -abụ na ị ga -adị iche n'etiti ndị asọmpi. Ọ bụghị ihe nzuzo na ndị mmadụ na -atụgharị uche na ngwaahịa nwere ụdị ọgbara ọhụrụ.
Dịka ọmụmaatụ, ị ga -emecha dọta n'otu ngwaahịa nke nwere atụmatụ dị ịtụnanya yana nkwakọ ngwaahịa ọgbara ọhụrụ. Ndị mmadụ na -enwekarị echiche na -adịghị mma maka ịma mma.
Mmadụ nwere ajọ mbunobi; anyị na -ahụ ihe mara mma ka ọ ka mma, n'agbanyeghị ma ha ka mma. Ihe ndị ọzọ niile ha nhata, anyị na -ahọrọ ihe mara mma, anyị kwenyere na ihe mara mma na -arụ ọrụ nke ọma. Dị ka ọ dị na okike, ọrụ nwere ike iso ụdị.
Steven Bradley, Onye edemede Isi Nhazi
Ọzọkwa, ọmụmụ tụkwara aro ka ị nwee ike nyochaa mkpesa na -ahụ anya n'ime milise sekọnd 50. Dị ka onye nrụpụta, ịkwesịrị inwe mmetụta, dọta uche n'ime nkeji iri ise na -ekwupụta onye ị bụ na ihe ị na -eme.
Ị ga -aghọta echiche ahụ site n'ile anya n'ụdị ịchọ mma; Anatomicals na Cetaphil.
Cetaphil na -eji atụmatụ dị mfe, agba na enweghị aha ngwaahịa na -atọ ụtọ, na -etinye ụda siri ike. Emebere ahịrị ngwaahịa ahụ iji gosi na ika ahụ bụ maka ngwaahịa na arụmọrụ ya. Ebe, Anatomicals na -ahọrọ aha ngwaahịa ọchị na ụdị font buru ibu.
Ha na-eji agba agba agba ma na-etinye ụda obi dị nro. Ọ dịkwa mkpa ka ị lekwasị anya na isi ihe ndị ịchọrọ ịgara ndị ahịa gị wee hụ na ha na -atụgharị uche na nhazi ngwaahịa gị.
Imewe na -akwalite nkwado nke ika
Ị nwere ike iche n'echiche Google na -egosipụta nsonaazụ ọchụchọ site na iji akara cursive ma ọ bụ akara ngosi McDonald pink? Anyị ghọtara na o siri ike iche maka mgbanwe ndị ahụ.
Nhazi Google na akara McDonald karịrị ihe eji emepụta ya; ha bụ akụkụ dị oke mkpa nke ika ha na nnukwu ihe atụ nke ịdị na -agbanwe agbanwe nke ika.
Nkwekọrịta dị mkpa mgbe ịchọrọ ịmepụta akara jikọtara ọnụ. O doro anya na ọ bụ iwu bụ isi nke na -eme ka akara ika gị nwee ihe ịga nke ọma.
Ụdị abụọ ahụ e kwuru n'elu lekwasịrị anya n'ịmepụta otu akara na -agụnye ihe ndị na -agaghị echefu echefu.
Na -akwalite njirimara ika nke na -eduga na ntinye aka kacha.
Na -abawanye uru ika nwere ike ịkwalite ahịa.
Na -enyere gị aka ịpụ iche na ụlọ ọrụ.
N'aka nke ọzọ, akara na -ekwekọghị ekwekọ na -egosi ọgba aghara, enweghị nhazi na mgbagwoju anya. Ọ nwekwara ike imebi ntụkwasị obi nke azụmahịa gị yana belata ohere ị nwere nke ọma.
Ọzọkwa, ịkwesịrị ịtụle akara gị dị ka njirimara ọha nke ụlọ ọrụ gị. Yabụ, ọ kwesịrị igosipụta njirimara kacha mma nke ụlọ ọrụ gị ma ọ bụ azụmaahịa iji tinye ndị na -ege ntị ntị.
Ọzọkwa, itinye ihe nbinye akara gị n'ahịrị ma ọ bụ ịhazigharị agba ya na -ebutekwa enweghị nkwekọrịta. Ndị mmadụ na -echezọkarị akara na -ekwekọghị ekwekọ. Maka na ha enweghị ike iche maka otu agba ma ọ bụ akara mgbe ha na -ekwu maka ya.
Dịka ọmụmaatụ, mgbe ị na -ekwu maka ya Coca-Cola, ị nwere ike see na akara ya nwere agba uhie na ya. Na mgbe ị ga -aga n'ihu Nike logo, ị nwere ike mata ya dị ka akpụkpọ ụkwụ ma ọ bụ akara nrụpụta uwe.
Yabụ, ọ bụrụ na ndị na -ege gị lekwasịrị anya enweghị ike jikọta agba dị iche iche na ika gị ma ọ bụ amataghị akara ya, ọ nwere ike ịdị mkpa ka ị rụọ ọrụ na nhazi ahụ, wee mee ka ọ na -agbanwe ka ndị na -ege gị lekwasịrị anya wee mata ya nke ọma.
Onye ahịa Garner tụkwasịrị obi na iji webụsaịtị webụsaịtị
Enweghị ịgọnahụ na ụfọdụ ndị mmadụ na -emekọrịta azụmahịa na nke mbụ site na webụsaịtị ya. Yabụ, mmetụta webụsaịtị gị hapụrụ dị oke mkpa ịtụle. Ezigbo ebe nrụọrụ weebụ nwere ike inye aka hapụ mmetụta na -adịgide adịgide na ndị ọbịa webụsaịtị gị.
Ebe nrụọrụ weebụ nwere atụmatụ ọjọọ adịghị atụkwasị obi ma ọ bụ eleta ya ogologo oge.
Ejikọtara imepụta interface adịghị mma na ọjụjụ ngwa ngwa na enweghị ntụkwasị obi nke webụsaịtị, "na -agbakwụnye," N'ọnọdụ ebe ndị sonyere na -enweghị mmasị na akụkụ ụfọdụ nke imewe, a naghị enyochakarị saịtị ahụ karịa na peeji nke ụlọ ma echeghị na ọ dị mma maka ịgagharị. daalụ ọzọ ”…
CrazyEgg, Ezi Nzube Weebụ Ọ Dị Mkpa?
Weebụsaịtị ngwaahịa ochie
Ebe nrụọrụ weebụ ahaziri ọhụrụ
a Onye na -ahụ maka ime ụlọ na Central Indiana enwetaghị otu ụzọ ruru eru site na saịtị ochie ha n'afọ gara aga. Ebe ọhụrụ ahụ, nke e mepụtara ma mepụta ya Highbridge ewepụtara ihe karịrị iri na abụọ na -eduga edu kwa ọnwa kemgbe ebidochara ya - yana otu okporo ụzọ. Nhazi nkeonwe, ihe ngosi ntụkwasị obi, ezigbo foto, na nkata mmadụ ji agwa ndị ọbịa okwu na -enweghị mgbagha maka ọrụ enyere.
Na -emetụta ndị ahịa nwere ụdị nkwakọ ngwaahịa na -adọrọ adọrọ
Nkwakọ ngwaahịa nke ngwaahịa ma ọ bụ ngwongwo ya na imewe weebụsaịtị. Ndị na -azụ ahịa gị na -akwụ ụgwọ maka ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ yana ngwugwu nwere mmetụta na ọnọdụ abụọ a.
Ọzọkwa, Blink - akwụkwọ nke Malcolm Gladwell dere na -akọwa isi okwu nke ọma na mgbakwunye ma ọ bụ obere tweaks na nhazi nkwakọ ngwaahịa nwere ike ịkpụpụta echiche onye ahịa gbasara ngwaahịa a.
Ọzọkwa, ha na -ewere ngwaahịa dị ka ngwakọta nke nkwakọ na ngwaahịa.
Ọ bụrụ na ịgbakwunye pasent 15 karịa odo na akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ na nkwakọ ngwaahịa 7 UP, ndị mmadụ na -akọ na ọ nwere ụtọ lime ma ọ bụ ụtọ lemon karịa, n'agbanyeghị na mmanya ahụ n'onwe ya anaghị emetụ ya aka. N'elu ite Chef Boyardee Ravioli, foto nke ịdị nso nke ihu mmadụ na -emetụta ịdị mma karịa mgbanye ahụ zuru oke ma ọ bụ agwa eserese ... 'm' na -eme ka ndị ahịa mata ngwaahịa ndị ahụ ka ọ dị ọhụrụ.
Ihe atụ ndị a na -egosi na nkwakọ ngwaahịa na -emetụta mmetụta onye ahịa, ịdị mma ya na ọbụna ụtọ ngwaahịa. Ọ bụrụ na ị leruo anya, ihe atụ 7 UP na -agwa ndị ahịa nwere mkpakọrịta dị iche na otu hue na mmeghachi omume nzuzo na ya.
Ya mere, ịme mkpebi nhazi gbakọọ aka na-enyere otu onye ahịa gị si ahụ, hụ ma rie ngwaahịa gị.
Kedu ka ika si agbanwe akara ngosi ha iji nwekwuo njikọ aka
Akụkọ Batman Logo
Ọtụtụ ndị na -ede akwụkwọ na -atọ ọchị bụ akara dị n'aka ha, ọkachasị ndị nwechara aha ụlọ ihe nkiri. Otu n'ime akara ngosi kachasị Logo dike Nke ahụ bụ ihe Batman kwuru. Emezigharịrị akara ama ama nke ụsụ na-efe efe ugboro ole na ole kemgbe mmalite ya, na akara ọhụrụ ewepụtara na 2000 na-egosi ezi agwa gbara ọchịchịrị nke agwa ọ na-egosipụta.
Mụbaa njirimara njirimara site na iji akara ngosi
Akara bụ ihe dị mkpa nke ụdị ọ bụla. Nhazi ya kwesịrị ịbụ nke na -arụ ọrụ nke ọma. Ọtụtụ azụmaahịa anaghị amata uru echiche dị mma nke ọma na njiri mara mma. Ha na-agakarị maka akara ngosi emere ma ọ bụ họrọ maka ịme onwe gị.
Ọzọkwa, imepụta akara ngosi abụghị maka ịhọrọ ụcha na -enwu gbaa na ụdị mkpụrụedemede pụrụ iche. Mana ọ kwesịrị igosipụta akara gị, zie ozi azụmahịa gị, nwee ezigbo font na palette agba. Ọ bụ eziokwu na nnukwu akara ngosi na -egosi ezigbo foto azụmaahịa na ụkpụrụ gị.
Akara dị mfe, na -agbanwe agbanwe, na agaghị echefu echefu nwere ike ịba uru. Ọ bụrụ na ị na -ewepụta akara ma ọ bụ na -eme atụmatụ itinye akụkụ ọhụrụ na akara gị dị ugbu a, ị nwere ike lekwasị anya na ọnọdụ, njirimara na uru gị iji hụ na akara ngosi gị na -amalite mmasị nke ndị na -ege gị lekwasịrị anya gburugburu ika gị.
Akụkọ Logo FedEx
Were akara FedEx dịka ọmụmaatụ. Ojiji nke oroma na odo odo na -etinye positivity na ịma mma. Ọ bụrụ na ị lere anya nke ọma, akụ a gosiri n'etiti mkpụrụedemede E & X na -agwa ịga n'ihu.
Ị nwekwara ike ịnwa ilekwasị anya n'ihe ndị dị oke mkpa ma tinye amamihe na njiri mara gị iji mee ọnụnọ subconscious, ọkachasị ma ọ bụrụ na ika gị bụ nke ụlọ ọrụ na -ezipụ ozi ma ọ bụ ngwa agha. Mana echefula ịmụta ka esi ebipụta akara ngosi iji chebe ya ka ọ ghara ịbụ onye ohi.
Dezie Ozi Agba na agba
Ị chetụla ihe kpatara ndị ọkachamara ji kwusie ike na ịhọrọ ụcha agba dị mma? Agba ndị a na -enyere aka ịtụgharị ozi gị ma kwalite njirimara ika.
Ọ bụrụ na ị kpachapụ anya họrọ, palette ụcha nke akara gị na -enyere aka n'ịkpalite ụdị mmetụta ziri ezi. Dịka ọmụmaatụ, Louis Vuitton na -eji agba ojii na akara ha nke na -eme ka ọ bụrụ akara ala na okomoko.
Họrọ Fonts ziri ezi
Akara mkpụrụedemede bụ njirimara njirimara nke akara gị ma nwee ebumnuche doro anya. Ị nwere ike ịmepụta ihe na nhọpụta mkpụrụedemede gị. Mana ọ kacha mma iji otu font na akara ngosi.
Mgbe ị na -ahọrọ mkpụrụedemede maka akara ngosi gị, mara na a na -ahụta na ndị nwere obi ike bụ mkpụrụedemede nwoke na mkpụrụedemede cursive dị ka mkpụrụedemede nwanyị.
Ị nwekwara ike iche maka iji mkpụrụedemede gbara okirikiri ka ha na -egosi nlekọta, ịdị nro na ịdị nro.
Lekwasị anya na Mmetụta Ọdịdị
Ị maara na akara nke akara ngosi gị nwere ike imezi ihe akara gị pụtara?
A kọwara BMW Logo
Dịka ọmụmaatụ, eserese okirikiri na -egosipụta ịdị mma, obodo, ntachi obi ma ọ bụ ọbụlagodi ịbụ nwanyị, ebe atụmatụ okirikiri ma ọ bụ nke nwere akụkụ siri ike ma dị nkọ na -ezipụ ozi nke ike, ọkachamara, nguzozi na arụmọrụ.
N'aka nke ọzọ, imepụta triangles nwere ike inye aka wepụta echiche dị ike, nke iwu ma ọ bụ nke sayensị.
Imewe nwere ike inye aka mee ka ndị na -ege gị lekwasịrị anya gbasaa
Ị chọrọ itinye aka n'ahịa dị iche? Nwaa tweaking nkwakọ ngwaahịa gị dị ugbu a. Ọ bụrụ na ị nwere akara nke mepụtara ngwaahịa nlekọta anụ ahụ maka ụmụ nwanyị, ị ka nwere ike lekwasị ahịa nwoke.
Ọ dịghị mkpa ịme mgbanwe ndị ọzọ na atụmatụ gị. Na ịrịọ maka igwe mmadụ, ị nwere ike họrọ mgbanwe imewe dị mfe.
Dịka ọmụmaatụ, Nivea na -enye ọtụtụ ngwaahịa nlekọta onwe onye, ​​gụnyere ude, ude ma ọ bụ deodorant nye ụmụ nwanyị. Ọzọkwa, ika ahụ jisiri ike gbasaa ahịa ha site na ịkagbu ọnụọgụ ụmụ nwoke site na iji atụmatụ dị nkọ na nke nwoke.
Dabere na Kansụl Nhazi ọmụmụ, azụmaahịa na -eche nche nwere ike mepụta ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ ọhụụ ugboro abụọ ma e jiri ya tụnyere azụmaahịa na -anaghị elekwasị anya na ihe nrụpụta. Yabụ, chee echiche ebe ị nwere ike iburu ika gị site na ịme mgbanwe ole na ole.
Itinye ego na imewe
Obi abụọ adịghị ya, imewe nwere ike inwe nnukwu mmetụta na azụmaahịa ma ọ bụ akara gị. O doro anya na ọmarịcha imewe na -eweta uru dị iche iche, gụnyere asọmpi asọmpi, nsonaazụ ahịa na -atọ ụtọ na ime ka ị pụọ iche na igwe mmadụ.
Dịka onye nnọchi anya akara gị, imewe na -enyere aka n'ịkwalite ntụkwasị obi ndị ahịa, na -eche maka ahịa ọhụrụ, na -akwalite ịdị n'otu nke ika, na -enwe mmetụta na -emetụta, na ịmalite mkpọsa na -aga nke ọma, na ndị ọzọ. Ya mere, ọ kacha mma ilekwasị anya na nhazi na ihe ndị na -eme ka ọ gaa nke ọma. N'ihi na itinye ego na imepụta ihe dị oke mkpa pụtara itinye ego na ihe ịga nke ọma gị ogologo oge.
Ngosipụta: edeziri akụkọ a ka ịgụnye njikọ njikọ yana ihe atụ ndị ahịa site na Douglas Karrsiri ike, Highbridge.
Tags: adobeadriana mmiriụdị anatomicalonye nduzi nkaakụkọ batman logontụkwasị obi nke ikaika udeCetaphilcoca-colaụcha agbantụkwasị obi nke ndị ahịadesignimewe isiụlọ ọrụ nhazi imewennyocha nyochaọmụmụ nhazigoogleakara googleụlọ akwụkwọ kọlejindị lilian crookslogologo agbalogo designọdịdị logoakara mcdonaldmahadum sayensị na teknụzụ missourinikepaul Randimepụta ngwaahịaSteven Bradleyụdịdịmedia tytonasụsụ anya
Anas Hassan bụ onye ndụmọdụ imewe n'otu ụlọ ọrụ na -emepụta akara Akara Poppin. Ọ nwere mmasị miri emi n'ịchọgharị ọnọdụ nke eserese eserese na ahịa dijitalụ. E wezụga nke a, ọ bụ onye na -anụ ọkụ n'obi n'egwuregwu bọọlụ ma na -enwe nri abalị steak oge ụfọdụ.
Uzo mkpirisi Google Search na oke